Italian meya anotyisidzira kutumira firethrowers kurwisa coronavirus: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 26 March 2020	• 14 Comments
Chii chiri chechokwadi kumeso kwehutongi icho chiri kupararira kuburikidza nevezvematongerwo enyika uye vezvenhau vari pamwe chete ne rinodzora kushorwa? Wona chiratidzo chemuraraungu. Ko muraraungu iwo pachivande chiratidzo cheenyika nyowani here? Nyika izere nemafungu akasarudzika senge panguva yaNoa? Chii chakaitika zvakare shure kweMafashama? Muraraungu?
"Tinotumira vapari vemoto!" Anodanidzira meya uyu wekuItaly.
Ikozvino isu tichiri kufunga kuti hatifanire kutora izvi chaizvo, asi ko kana izvi zvikaitika chaizvo? Tarisa mumutauro unotyisidzira unobva mumuromo meya uyu. Ko Minister Grapperhous vanozotangawo kubata neconavirus se 'isingadzoreki' uye 'iri kubuda mumaoko' kuburikidza nevezvenhau? "Nekuti hauteerere uye haugare mukati!"
Unoyeuka here? yambiro iyi kubva munaNovember 2019?
Mubhuku rangu uye mune zvakawanda zvinyorwa (zvakaverengeka zvemahara) apa pane iyo saiti ini ndakatsanangura kuti muraraungu chiratidzo cheMwari wenyika itsva Order: Lucifer. Iyo nyowani yenyika itsva inoshandira nyika yakafanana naLuciferi. Chiratidzo chaLuciferi ndiBaphomet: iyo hermaphrodite (androgynous kana 'jenda rinotsigira') chimera bha (kuverenga pano mamwe chimerism is).
“Ndakamumisa ndokuti, 'Tarira, iyi haisi firimu. Iwe hausi Will Smith muI Am Legend. Enda kumba. "
Uku ndiko kuunganidzwa kwakakwenenzverwa kweMameya eItaly kurasikirwa nawo kuvanhu vanoputsa # Covid19 kugariswa. Ehe, zvinyorwa zvidiki zviripo. pic.twitter.com/60V4Csuonb
Vincenzo De Luca, Meya weguta reItaly reCampania
Bhuku kubva 2016 Iyo Meso eRima naDean Koontz anotaura nezve Wuhan-400 hutachiona hutachiona
Iyo yemapurisa yakaipisisa kupfuura yeGerman yeNazi inoitika kunge mhumhi mune chipfeko chemakwai uye hauzvione
Tags: meya, coronavirus, de, Featured, Italian, Italy, Luca, chengetedza, murarabungu, rainbook, ari, Vincenzo, firethrowers
26 March 2020 pa 10: 26
Nguva yatiri ikozvino? Minute 3:17 muvhidhiyo
26 March 2020 pa 23: 49
Ini ndinofunga pakutanga na3: 30 mangwanani apo mumwe munhu anotyisidzira kuti atambure kubva kune imwe yeCorvid zviratidzo.
26 March 2020 pa 11: 30
Tamba mimwe mitambo yemavhidhiyo, anodaro mumwe wevashandi vemitemo.
vamwe vaongorori, kusanganisira WHO, vari kuti izvozvi "zvinowira mukuitika chaiko" kuri kubuda uko "mitambo" yese inogadziridzwa nekuvandudzwa kwazvo, nevanhu vari mukamuri ravo rekugara vanomanikidzwa kana vanonzi "vanozvipira" kuzviparadzanisa nevamwe Nyika dzepasi dzinogona kufamba izvo zvisinganzwisisike kubva kune chaicho chinhu. Kunyangwe zvirongwa zvekudzidzisa zvinokwanisa kupihwa kuvana kuburikidza nenyika dzepasiripo kuitira kuti munguva yemberi havachafanira kuenda kuchikoro asi kuenda ku "kirasi yekudzidzira" kwavanogona kuwana zvidzidzo nevamwe vana kubva kumudzidzisi anodzidzisa chaizvo, uye izvo zvisiri zvechokwadi inokwanisika.
Zvinonzi zvinotarisirwa kuti munguva pfupi inotevera vanhu vangangofanirwa kuve vari vega zvachose nekuti hutachiona hunoramba huchiputika, asi nehutachiona hwechokwadi ichi hachisi dambudziko zvachose uye vanhu havazomboda kuenda kunze nekuti iyo nyika chaiyo uko vanokwanisa kusangana zvachose kubva pane chinhu chaicho.
Saka transhumanism zvakare yakanyanya kukurudzirwa kuburikidza neidzi dzinonzi kukiya uye kuzviparadzanisa uye munguva pfupi ichave yakajairika uye yakanyanya kuwanda kusimudzira.
26 March 2020 pa 12: 03
Uye vadiki ava vanodzidziswa nzira yekutevera pasi mabheya. Tsiva mabheya iwayo ne 'zvinhu zvinotyisidzira' uye chii chauri kuona pane iyo app?
26 March 2020 pa 13: 00
Vanamukoti vashandi uye vanhu vane mabasa akakosha vane chando vanogona kungoita basa.
26 March 2020 pa 13: 24
Dzimba dzakawanda dzekugara pamudyandigere muNetherlands dzakapetwa kodhi kiyi kunze kwemamwe masuo. Panguva iyoyo, munhu mukuru haakwanise kuvhura musuwo kubva mukati. Ndihwo hunyanzvi hwazvino. Kana iyo coronavirus ikofungidzirwa, gonhi rinogona kukiya. Kazhinji pane chinzvimbo chekunamatira padhuze nepemba yekurera yakadaro. Mushure mezvose, inowanzo kuve yekupedzisira chiteshi. Vana havachagona kushanyira. Lockdown. Neraki, ivo vanogona kuvimba nehutano hwakanaka. Vashandi vanoyamwisa vanoomerera zvinyoro-nyoro kune protocol uye zvimwe vanochengeta vakwegura vane hutachiona mukamuri yavo .. kana zvisizvo unomhanya nengozi yekutapukirwa (uye unofanira kugariswa) kana kuti vamwe vanhu vakura vanotapukirwa ... haudi izvozvo. Chimiro chinodzoka kubva pabhawa dzimwe nguva chinoti "coronavirus positive". Zvinogumbura kuti kuvharira munhu akura kudaro, asi hongu .. "Zvinofanira kunge zvisiri zvinonakidza, asi ndiani anogona kupokana nemhedzisiro yebhuku? Unonamatira kuchirevo… ”
Harry Mens achazova sei chaizvo?
26 March 2020 pa 13: 26
26 March 2020 pa 15: 39
Zvakanaka, Vincenzo de Luca. Kune imwe zvakare here. Ivo zvakare vari munzvimbo dzakakosha muItari. Zvese zvinhu zvinorongwa kunze kwenyika uye zvinotungamirwa naHen. Vanoona zvese, Ivo vanofunga zvese, Ivo ndizvo zvakajairwa, Ivo inyanzvi, Ivo vezvenhau, Ivo ruoko rwakasimba, etc. Isu tinongova mukudzvinyirira kunotongwa naVo. Isu Isu, vanhuwo zvavo, tinozvibvisa sei Iwo?
Kuva munhu akanyora kuti:
26 March 2020 pa 17: 34
Kutanga pane zvese ini ndinoda kukutendai kune zvakawanda zvine nzwisiso zvinyorwa pamusoro pemakore. Kuti nditsigire basa rako, asiwo nezviri mubhuku racho, ndakaidaira. Ndinovimba kuti munhu wese wepanyika anogona kutarisa muchionioni pane zvaari kuita uye oshamisika zvakadzama kuti chii chinonzi hupenyu.
Ndinoshuvira munhu wese yakawanda simba, huchenjeri uye hutano hwese munguva ino yakaoma.
26 March 2020 pa 22: 40
Kuedzwa kwehutachiona hweCorona inhema!
27 March 2020 pa 07: 09
Chinhu chidimbu chakakosha kuburikidza nechisungo kuburikidza nejhonny yakasungirirwa.
Iyo CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Chaiyo-Nguva RT-PCR Diagnostic Panel ndeye chaiyo-nguva RT-PCR bvunzo yakagadzirirwa iyo hunhu hwekutarisa kweiyo nucleic acid kubva ku2019-nCoV mune yepamusoro uye yepasi nzira yekufema. nasopharyngeal kana oropharyngeal swabs, sputum, yakadzika yekufema nzira yekutsvaira, bronchoalveolar lavage, uye nasopharyngeal wash / aspirate kana nasal aspirate) yakaunganidzwa kubva kune vanhu vanosangana ne2019-nCoV kiriniki uye / kana chirwere chepfungwa (semuenzaniso, zviratidzo zvechipatara uye zviratidzo zvinosangana ne2019- hutachiona hweNCoV, kusangana pamwe neyakafungidzirwa kana yakasimbiswa 2019-nCoV nyaya, nhoroondo yekufamba kuenda kunzvimbo dzenzvimbo dzakaonekwa zviitiko zve2019-nCoV, kana zvimwe zvinongedzo zvekupokana izvo uongorori hwe 2019-nCoV hunogona kuratidzwa sechikamu chekuongororwa kwehutano hweveruzhinji). Kwayedza muUnited States inongogumira kumarabhoritari akaisirwa pasi peClinical Laboratory Improvement Amendments ya1988 (CLIA), 42 USC § 263a, kuita bvunzo dzakaomarara.
Mhedzisiro ndeyokuzivisa kwe2019-nCoV RNA. Iyo 2019 nCoV RNA inowanzoonekwa mumhando yepamusoro uye yepasi yekufema panguva yekurwara. Mhedzisiro inobatsira inoratidza kutapukira kwehutachiona ne 2019-nCoV asi usarape hutachiona kana utachiona hwehutachiona pamwe nemamwe hutachiona. Mumiririri anoonekwa anogona kunge asiri chaiye chikonzero chechirwere. MaLabhoratri mukati meUnited States uye matunhu ayo anodikanwa kuti vataure zvese zvakanaka kune zviremera zvehutano zvakafanira.
Mhedzisiro isina kunaka haifukidzi kutapurirana kwe2019-nCoV uye haifanirwe kushandiswa seiyo yega nheyo yekurapa kana zvimwe sarudzo dzemabatiro evarwere. Mhedzisiro isina kunaka inofanirwa kuve pamwe pamwe nekuongororwa kwekliniki, nhoroondo yemurwere, uye ruzivo rwechirwere.
Isu hatibatsirane kubva kuhutachiona test. Chirongwa chekurapa chinogadzwa sei uye ndeipi mishonga inoshandiswa? Protocol? Zvakafanana nekuyedza varwere nevarapi uye kuona kana kurapwa kuri iko chaiko. Mubvunzo ndewkuti varwere havarware zvakanyanya nekuda kweizvi. Nzwisisa kuti vanachiremba nanamukoti havapfeke nguva dzose uye vanokwanisa kutopfuudza chirwere / chirwere kune vangangoita varwere vechi corona. Uye dzimwe nguva pfuurira kushanda apo ivo pachavo vaine mukana corona. Varwere vanozopedzisira vafa kubva kukorona kana chimwe chinhu here? Cui bono? Izvo chaizvo, nyika-inovandudza magariro mainjiniya.
27 March 2020 pa 00: 36
@ martin Mukuwedzera kune (chimiro che) chiratidzo mune iyo meseji, teerera zvakare kune mutauro wemuviri / chimiro chechiso chevatungamiriri ava kana vanorwara
Mukushaikwa kwekunzwa nehana, iyo chinangwa chechokwadi chinoratidzwa pachiso
Zvakare zvakakurumbira izvo izvo mwoyo uzere ne ...
Mwoyo weLuciferian unozviratidza mumaziso / kumeso kwekutaura uye mutauro wemuviri.
Nekuda kwekuvapo kwe "bofu nzvimbo" mune yedu mindset, tinofungidzira (isu tinowira iwo mazano) kuti ane hushamwari chiremera munhu ane moyo / moyo. Zvinoreva chaizvo kukosha kwechiso.
Takasvika panguva iyo hunhu (persona = maski) huchiratidza huso hwavo hwechokwadi.
Ichi chinongedzo chinopa zvakadzika zvinotungamira uye mienzaniso. Kuzivikanwa kumeso kubva pakuziva.
On sidenote: AI ipfungwa yakanyanya kuwanda kana kuti kwete kopi yekugona kwevanhu. Komputa haina kukodzera (h) kuziva yechokwadi. Asi chero bedzi munhu wega wega asina kudzoreredza chitupa chake chechokwadi (mindset), anoenderera mberi achikumbira kune vekunze masimba.
28 March 2020 pa 07: 33
Gordon Brown anodaidzira kuti hurumende yepasi rese itore matanho eparuzere
Ex-PM pakati pe2008 mabhangi kununura anoratidza basa revatungamiriri uye nyanzvi dzehutano
eya, iyo ajenda yevanowanzo fungidzirwa inowedzera kuuya pamberi
« VaTrump, Q-Anon uye 'kuchenesa kwakadzika' ngano (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Vari varume vanoita zvechisikana ndivo mainini chinangwa cheiyo coronavirus? Hwaro hwesainzi »
Total Visits: 1.457.978
Coronavirus: hutachiona hunobvepi uye sei hunowanda uye huchifamba?
guppy op Corona Dambudziko: Zvinogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu kuti ubve kunze kwekuvhara kunze kwekutanga kwekutsvaga uye maapps
SalmonInClick op Corona Dambudziko: Zvinogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu kuti ubve kunze kwekuvhara kunze kwekutanga kwekutsvaga uye maapps